Showing १३१-१४० of ४,९०३ items.
गोदरेजको ‘कम खर्च धेरै बचत’ योजना
विजयपुर/दशैंतिहारको अवसरमा गोदरेजले ‘नाउ इज वाउ फेस्टिभल, कम खर्च धेरै बचत’ योजना ल्याएको छ । योजनाअन्तर्गत गोदरेजका इलेक्ट्रोनिक सामानको खरिदमा आकर्षक क्यासब्याक तथा उपहार पाउने छन् । गोदरेजका समान गरिद गर्दा ग्राहकले ३१ प्रतिशतसम्म क्यासब्याक पाउने कम्पनीले जनाएको छ । ३ जना ग्राहकले बम्पर उपहारमा ५५ इन्चको टिसिएल कर्भ स्मार्ट एलइडी टिभीसमेत जित्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ । गोदरेजको रेफ्रिजेरेटर खरिदमा ३३ हजारसम्म, वासिङ मेसिन खरिदमा १५ हजार ३ सयसम्म, माइक्रोवेभ ओभनको खरिदमा ७ हजार ५ सयसम्म, एयर कुलरको खरिदमा ५ हजार २ सयसम्म ‘क्यासब्याक’ पाउने छन् । एसी खरिद गर्ने ग्राहकले जडानमा ४ ह
नेपाल लाइफद्वारा मृत्यु दाबी भुक्तानी
धरान/दुर्घटनाबाट निधन भएका एक मृतकको परिवारलाई नेपाल लाइफ इन्स्यूरेन्स लिले मृत्यु दाबी भुक्तानी गरेको छ । सुनसरीको वराहक्षेत्र नगरपालिका–७ का मृतक बाबुराम पौडेलको परिवारलाई मृत्यु दाबी भुक्तानी बुधबार हस्तान्तरण गरे । पौडेलले ८ वर्षअघि ९० हजार रुपैयाँ बराबरको बिमा गरेका थिए । गत जेठ २६ गते धरान–८ भोटेपुलमा दुर्घटनाबाट मृत्यु भएका उनको पत्नी सावित्रा पौडेललाई कम्पनीले २ लाख २४ हजार ३६३ रुपैयाँ बिमा दाबी भुक्तानी गरेको कम्पनीका धरान शाखा प्रमुख युवराज श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
चाडपर्व नजिकएसँगै बजार अनुगमनलाई तीव्रता
गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय झापाले चाडपर्व नजिकएसँगै बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ । कार्यालयले यही असोज १ गतेदेखि १३ सम्ममा २० फार्म, पाँच पेट्रोलपम्प, सिमेन्ट उद्योग, हार्डवेयर पसल, किराना पसल र मिठाइ पसलमा अनुगमन गरेको जनाएको छ ।कार्यालयका प्रमुख मुकुन्द चौहानले अनुगमनका क्रममा नवीकरण म्याद सकिएका फार्मलाई तत्काल नवीकरण गर्न निर्देशन दिएको बताए । उनले कपियय पसलले अनुमति नलिई प्रयोग गरेका डिजिटल तराजु नियन्त्रणमा लिएर कारबाही अगाडि बढाइएको समेत जानकारी दिए । उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी त्रिलोचन रिमालको संयोजकत्वमा रहेको अनुगमन समितिसँग मिलेर पनि बजार अनुग
पानीटङ्की व्यापार समितिको विरोध
भद्रपुर । नेपाल भारत सीमाको काँकडभिट्टा पुललाई सामान्य बनाउनको लागि पानीटङ्की व्यापार समितिले विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । नेपाल सरकारले सिमाना खोल्ने निर्णय गरेपछि भारत सरकारले भारत–नेपाल सीमाको काँकडभिट्टा पुल पनि खोल्नु पर्ने माग राखि विरोध गरेका हुन् । उनीहरुले नजिकैको भारतीय सीमा प्रशासको कडा शब्दमा आलोचना गर्दै विरोध जनाएका छन् । पानीटङ्की नेपाल – भारत सिमाना नजिकै रहेर विरोध गरेका थिए ।नेपाली नागरिकहरु पनि हाट बजार गर्न भारतीय क्षेत्रमा आउँछन्, जब कि भारतीय क्षेत्रमा बस्ने लाखौं मानिसहरु आफ्नो जीविकोपार्जनको लागि नेपालमा निर्भर छन् । सीमा क्षेत्र पानीटङ्की लगायतमा बसोबास गर्ने हजारौ
कोरोना महामारी कम भएसँगै पार्कहरू खुल्न थाले
इटहरी । प्रदेश १ मा नै नयाँ प्रविधि र भौतिक संरचनाका साथ स्थापना भएको ‘इपिल्याण्ड एण्ड वाटर पार्क’ पुनः सञ्चालनमा आएको छ । कोरोना महामारीको कारण लामो समयदेखि बन्द रहेको पार्कलाई आज (बिहीबार)देखि पुनः सञ्चालनमा ल्याइने भएको हो ।कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमका कारण बन्द भएका प्रदेश–१ का ठूला मनोरञ्जन पार्कहरू धमाधम सञ्चालनमा आउन थालेका छन् । ६० करोड रुपैयाँ लगानीमा सञ्चालनमा रहेको पार्क लामो समयदेखि बन्द हुँदा कम्पनीले आर्थिक नोक्सानी व्यहोर्नु परेको कम्पनीका सञ्चालक भीमबहादुर पौडेलले जनाए । कोरोनाको कारण समस्यामा परेको व्यवसायलाई आवश्यक सुरक्षा अपनाएर सञ्चालनमा ल्याएको उनको भनाइ थियो । फनपार्कका सञ्च
एनसेल दुई विधामा पुरस्कृत
धरान । एनसेल आजियाटा लिमिटेड ‘ग्लोबल बिजनेस आउटलुक अवार्ड २०२१’ का दुई विधामा पुरस्कृत भएको छ । एनसेलले ‘मस्ट सोसिएल्ली रेस्पोन्सिबल टेलिकम कम्पनी’ र एनसेलका कार्यकारी प्रमुख एण्डी चोङले ‘टेलिकम सीईओ अफ दि इयर’ अवार्ड जितेका हुन् । एनसेलले उक्त अवार्ड एकसाथ प्राप्त गरेको छ । जीबीओले हरेक वर्ष विश्वभरका कम्पनीहरूलाई उत्कृष्टताका आधारमा पुरस्कृत गर्दै आएको छ । विशेषगरी बैङ्किङ, वित्तीय, घरजग्गा, दूरसञ्चार, उड्डयन तथा अन्य विभिन्न क्षेत्रमा उत्कृष्ट कार्य गर्ने कम्पनी र नेतृत्वकर्ताहरूलाई अवार्ड दिने गरिएको छ । त्यस्तै एनसेल ‘वल्र्ड कम्युनिकेसन्स अवार्ड २०२१’ का दुई छुट्टाछुट्टै विधा ‘सोसियल कण्ट
वराहमा विद्युतीय स्कुटर बिक्री प्रारम्भ
विजयपुर । वराह ग्रुप अफ कम्पनीले धरानमा विद्युतीय स्कुटर बिक्री सुरु गरेको छ ।कम्पनीले बुधबारदेखि बिक्री सुरु गरेको हो । बिजुलीबाट चार्ज गरी चलाउन सकिने स्कुटर बजारमा लिएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले औपचारिक कार्यक्रम गरी स्कुटरको बिक्री सुरु गरेको हो । स्कुटर ३ वटा मोडेलका रहेको कम्पनीका मिडिया संयोजक प्रमोद पोर्तेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार विद्युतीय स्कुटर ‘ई–प्लुटो सेभेन जी’ को मूल्य २ लाख ४९ हजार रुपैयाँ रहेको छ । ‘इटरेन्स’ को मूल्य २ लाख २९ हजार र इटरेन्स प्लसको १ लाख ९९ हजार रुपैयाँ रहेको छ । स्कुटर एक पटक चार्ज गरेपछि १ सय १६ किलोमिटरसम्म कुद्ने कम्पनीले जनाएको छ । दशैंतिहारको अवसर
जिओकृषि कार्यक्रमबारे अष्ट्रेलियन एडको अनुगमन
पथरीशनिश्चरे । अनलाइनमार्फत कृषिका समस्या र त्यसको समाधानका बारेमा जानकारी दिन मोरङको पथरी शनिश्चरेमा १ नम्बर प्रदेशकै पहिलो ‘जिओकृषि एप’ सुरु भएको सन्दर्भमा यसको मुख्य सहयोगी संस्था अष्ट्रेलियन एडका प्रतिनिधिले अनुगमन गरेका छन् ।जिओकृषिको प्राविधिक सहयोगमा अष्ट्रेलियन एड, अष्ट्रेलियन लुथरन वल्र्ड सर्भिस, द लुथरन वल्र्ड फेडेरेशनको सहकार्य तथा पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाको व्यस्थापनमा लुथरन सामुदायिक कल्याण समाजले नगरमा जिओकृषिको कार्यालय असोज ७ गते उद्घाटन गरेको थियो ।लुथरन विश्व संगठन अन्तर्गत अष्ट्रेलियन एडको जेनेभाकी रिजनल कोअर्डिनेटर सुसन मोयुस, अष्ट्रेलियन दुतावास काठमाडौंकी कामक्ष राई याक्थुम
सुनसरी प्रशासनले बजार अनुगमन गर्ने
इनरुवा । सुनसरी जिल्ला प्रशासनले दशैंतिहार लक्षित अनुगमन गर्ने तयारी थालेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकालको अध्यक्षतामा मङ्गलबार बसेको सरोकारवालाको बैठकले बजार अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रजिअ ढकालका अनुसार जिल्लाका सबै पालिका क्षेत्रका बजार अनुगमन गरिनेछ । ढकालले अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन खाद्य तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयसहित सम्बन्धित कार्यालय तथा निकायलाई निर्देशन दिइएको बताए । उनले उपभोक्ता हितलाई ख्याल राखी बजार अनुगमनको कार्यलाई निरन्तरता दिन भनिएको बताए । बैठकका सहभागीहरूले अनुगमन र एक्सन सँगसँगै अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरूले अनुगमनको कार्यलाई कडाइका साथ ला
मोरङको पथरीमा नौ कृषि फर्म प्रारम्भिक छनोटमा
पथरीशनिश्चरे । नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनाका लागि मोरङको पथरी शनिश्चरे नगरका ९ वटा कृषि फर्मको प्रारम्भिक छनोट गरिएको छ ।इनोभेसन आयोजनाको अनुदान वितरणका लागि नगरबाट पेश भएका परियोजनामध्ये प्रारम्भिक छनोटमा परेका ९ फर्महरूको अनुगमन गरिएको छ । आयोजनाका डा. सुशील अधिकारी, योगेन्द्रप्रसाद शर्मा, लेखनाथ खरेल तथा नगरको पशुपंक्षी शाखा प्रमुख हेमचन्द्र दाहालको टोलीले फर्मको अनुगमन गरेको हो ।बाख्रामा वडा नम्बर २ बाट प्रेमा श्रेष्ठ, ३ बाट रामप्रसाद खनाल, ५ बाट मनमाया पाण्डेको फर्म प्रारम्भिक छनौटमा परेको छ । त्यस्तै, दूधका लागि वडा नम्बर ३ बाट चन्द्रिका सापकोटा, भला रेग्मी, ५ बाट विशाल पाण्डे,